ကိုယ်က အမြွှာမွေးနိုင်ချေများတဲ့ လူတစ်ယောက်လား။ - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကိုယ်က အမြွှာမွေးနိုင်ချေများတဲ့ လူတစ်ယောက်လား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်တည်းထက် အမြွှာလေးတွေ လိုချင်တဲ့သူပိုများကြပါတယ်။ ဗိုက်လည်းတစ်ခါပဲ အနာခံရတယ်၊ ကလေးက ၂ ယောက်တောင်ရမှာ။ ပြီးတော့ အမြွှာလေးတွေဆိုတော့ ကလေးအချင်းချင်းလည်း ကစားဖော်ကစားဖက်ရှိတော့ သူတို့လည်း မပျင်းရတော့ဘူးလေ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးတစ်ယောက်တည်းထက် အမြွှာလေးတွေမွေးတာကလည်း ပိုခေတ်စားလာတာဆိုတော့ အမြွှာလိုချင်တဲ့စုံတွဲတိုင်း ဒါလေးတွေသိထားသင့်တယ်နော်။ ။
အမြွှာလေးမွေးမလား မမွေးဘူးလားဆိုတဲ့ အပေါ် ဘယ်လိုအချက်တွေက သက်ရောက်တာလဲ ။ ။
မျိုးရိုးထဲမှာ အမြွှာလေးမွေးထားတဲ့သူရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာလည်း အမြွှာလေးမွေးနိုင်ချေများပါတယ်။ အထူးသ့ဖြင့် အမေဘက်က အဒေါ်တွေ အဖွားတွေက အမြွှာလေးမွေးဖူးထားရင် ကိုယ်လည်း အမြွှာလေးတွေ မွေးနိုင်ချေရှိပါတယ်။
အနောက်တိုင်းသားတွေက အာရှသားတွေထက် အမြွှာလေးတွေ မွေးနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေထဲကမှ လူမည်းတွေကလူဖြူတွေထက် အမြွှာလေးတွေ မွေးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။
ရှေ့မှာ ကလေးတွေ အများကြီးမွေးထားတဲ့သူတွေကပိုပြီး အမြွှာလေးတွေ မွေးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ကလေး ၈ ယောက်လောက်မွေးပြီးတဲ့သူတွေက အမြွှာမွေးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်တဲ့အခါ တစ်လကို သားဥ နှစ်လုံးလောက် ကြွေတတ်တာကြောင့် ၃၅ နှစ်နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အမြွှာမွေးနိုင်ချေပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
BMI 25နဲ့ အထက်ဆိုရင် ဝနေတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပြီး BMI 30 ကျော်နေပြီဆိုရင်တော့ အဝလွန် နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလို အဝလွန်တာမှာ မကောင်းတာတွေများပေမယ့် အမြွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ချေ အခြားသူတွေထက်ပိုများတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက် တစ်ချက်တော့ ရှိပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် non-identical twin ရုပ်ချင်းမတူတဲ့ အမြွှာလေးတွေ မွေးနိုင်ချေပိုများပါတယ်။
စားသောက်မှု ပုံစံ ။
• ပရိုတင်းနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေများများစားပေးရင် အမြွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ရချေပိုများပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ အသီးအရွက်တွေ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာတွေများများစားတဲ့သူတွေက အမြွှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းပါတယ်။
• အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ အမြွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချင်ရင် ဆေးတွေ သောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုလေ။ ဒါမှန်ပါတယ်။
• အမြွှာလေးတွေ လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အမျိုးသားဆီက သုက်ပိုးလေးတွေ အားကောင်းအောင် သန်စွမ်းအောင် (ဒါမှမဟုတ်) အမျိုးသမီးဆီက မျိုးဥ တစ်လုံးထက်ပိုကြွအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ ဆေးတွေရှိပါတယ်။
• ဒါပေမယ့် ဆေးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ဝယ်သောက်တာထက်စာရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်နဲ့ တည့်မတည့် စမ်းသပ်ပြီးမှ သောက်တာက ပိုစိတ်ချရမှာပါ။
ရင်သွေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားထဲမှာ အချိန်ခြားတာ။
• ရင်သွေးတွေကို အချိန်သိပ်မခြားဘဲ မွေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် ရင်သွေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားထဲ ၄ နှစ် ၅ နှစ်လောက်ခြားထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အမြွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း လိုချင်လား ။နှစ်ယောက်လိုချင်လား ကိုယ်လိုချင်သလို ရွေးလို့ရတာကြောင့် ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားကိုယ်ဝန်နဲ့ try ကြည့်လို့လည်း ရပါတယ် ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
ကိုယျက အမွှာမှေးနိုငျခမြေားတဲ့ လူတဈယောကျလား။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ ကလေးတဈယောကျတညျးထကျ အမွှာလေးတှေ လိုခငျြတဲ့သူပိုမြားကွပါတယျ။ ဗိုကျလညျးတဈခါပဲ အနာခံရတယျ၊ ကလေးက ၂ ယောကျတောငျရမှာ။ ပွီးတော့ အမွှာလေးတှဆေိုတော့ ကလေးအခငျြးခငျြးလညျး ကစားဖျောကစားဖကျရှိတော့ သူတို့လညျး မပငျြးရတော့ဘူးလေ။ နောကျပိုငျးမှာ ကလေးတဈယောကျတညျးထကျ အမွှာလေးတှမှေေးတာကလညျး ပိုခတျေစားလာတာဆိုတော့ အမွှာလိုခငျြတဲ့စုံတှဲတိုငျး ဒါလေးတှသေိထားသငျ့တယျနျော။ ။
အမွှာလေးမှေးမလား မမှေးဘူးလားဆိုတဲ့ အပျေါ ဘယျလိုအခကျြတှကေ သကျရောကျတာလဲ ။ ။
မြိုးရိုးထဲမှာ အမွှာလေးမှေးထားတဲ့သူရှိတဲ့အခါ ကိုယျ့မှာလညျး အမွှာလေးမှေးနိုငျခမြေားပါတယျ။ အထူးသ့ဖွငျ့ အမဘေကျက အဒျေါတှေ အဖှားတှကေ အမွှာလေးမှေးဖူးထားရငျ ကိုယျလညျး အမွှာလေးတှေ မှေးနိုငျခရြှေိပါတယျ။
အနောကျတိုငျးသားတှကေ အာရှသားတှထေကျ အမွှာလေးတှေ မှေးနိုငျခြေ ပိုမြားပါတယျ။ အနောကျနိုငျငံသားတှထေဲကမှ လူမညျးတှကေလူဖွူတှထေကျ အမွှာလေးတှေ မှေးနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
ရှမှေ့ာ ကလေးတှေ အမြားကွီးမှေးထားတဲ့သူတှကေပိုပွီး အမွှာလေးတှေ မှေးနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။ ကလေး ၈ ယောကျလောကျမှေးပွီးတဲ့သူတှကေ အမွှာမှေးနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ အသကျ ၃၅ နှဈကြျောတဲ့အခါ တဈလကို သားဥ နှဈလုံးလောကျ ကွှတေတျတာကွောငျ့ ၃၅ နှဈနောကျပိုငျး ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ အမွှာမှေးနိုငျခပြေိုမြားတယျလို့ဆိုပါတယျ။
BMI 25နဲ့ အထကျဆိုရငျ ဝနတေယျလို့သတျမှတျကွပွီး BMI 30 ကြျောနပွေီဆိုရငျတော့ အဝလှနျ နတေယျလို့ဆိုကွပါတယျ။ ဒီလို အဝလှနျတာမှာ မကောငျးတာတှမြေားပမေယျ့ အမွှာကိုယျဝနျဆောငျနိုငျခြေ အခွားသူတှထေကျပိုမြားတယျဆိုတဲ့ ကောငျးတဲ့အခကျြ တဈခကျြတော့ ရှိပါသေးတယျ။ အထူးသဖွငျ့ non-identical twin ရုပျခငျြးမတူတဲ့ အမွှာလေးတှေ မှေးနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ။
စားသောကျမှု ပုံစံ ။
• ပရိုတငျးနဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှမြေားမြားစားပေးရငျ အမွှာကိုယျဝနျဆောငျနိုငျရခပြေိုမြားပါတယျ။ ဆနျ့ကငျြဘကျအနနေဲ့ အသီးအရှကျတှေ အဆီနညျးတဲ့ အစားအစာတှမြေားမြားစားတဲ့သူတှကေ အမွှာကိုယျဝနျရနိုငျခနြေညျးပါတယျ။
• အားလုံးကွားဖူးကွမှာပါ။ အမွှာကိုယျဝနျဆောငျခငျြရငျ ဆေးတှေ သောကျလို့ရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကိုလေ။ ဒါမှနျပါတယျ။
• အမွှာလေးတှေ လိုခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အမြိုးသားဆီက သုကျပိုးလေးတှေ အားကောငျးအောငျ သနျစှမျးအောငျ (ဒါမှမဟုတျ) အမြိုးသမီးဆီက မြိုးဥ တဈလုံးထကျပိုကွှအောငျ လုပျလို့ရတဲ့ ဆေးတှရှေိပါတယျ။
• ဒါပမေယျ့ ဆေးတှကေို ကိုယျ့ဘာသာ ဝယျသောကျတာထကျစာရငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး ကိုယျနဲ့ တညျ့မတညျ့ စမျးသပျပွီးမှ သောကျတာက ပိုစိတျခရြမှာပါ။
ရငျသှေးတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကွားထဲမှာ အခြိနျခွားတာ။
• ရငျသှေးတှကေို အခြိနျသိပျမခွားဘဲ မှေးတဲ့ အမြိုးသမီးတှထေကျစာရငျ ရငျသှေးတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကွားထဲ ၄ နှဈ ၅ နှဈလောကျခွားထားတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ အမွှာကိုယျဝနျဆောငျနိုငျခြေ ပိုမြားပါတယျ။
ဖနျပွှနျသန်ဓသေားကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ တဈယောကျတညျး လိုခငျြလား ။နှဈယောကျလိုခငျြလား ကိုယျလိုခငျြသလို ရှေးလို့ရတာကွောငျ့ ဖနျပွှနျသန်ဓသေားကိုယျဝနျနဲ့ try ကွညျ့လို့လညျး ရပါတယျ ။ ။
Feb 2020 ( 271 )